Yekutsika mota tsoka fekitori, vatengi - China mota tsoka tsoka vagadziri
Yakasimba uye Inodzivirira TPE Mota Tsoka Mats neMuvara Ruvara
Bensen's TPE mota tsoka tsoka haina-chepfu, isina hwema, uye FDA yakaedzwa, izvo zvinoita kuti ive chigadzirwa chakachengeteka zvachose kune vatengi kuti vave nechokwadi.
Bensen Tsika Yakakodzera Floor Mats 2 Row Liner Set Nhema
TPE tsoka tsoka dzakagadzirwa naBensen dzakagadzirwa zvinoenderana nemota yemota yaunopa, uye haizomanikidze gasi rinokanganisa, nezvimwewo, kudzikisa njodzi dzekuchengetedza dzakabatana nemakumbo etsoka dzemota.
Hwakanaka Hwakanaka TPE Car Floor Mats yeMota
TPV kuchengetedza zvakatipoteredza utility modhi mota tsoka tsoka yadarika kuburikidza ine chiremera kwazvo EU SGS kambani ROHS10 certification, formaldehyde certification. Saka pavanotyaira mota munzvimbo yakatetepa yekutyaira, mutengi anogona kunakidzwa isina-chepfu isina hwema, mhando yepamusoro, nharaunda yakasununguka.
TPE Yese Mamiriro ekunze Car Floor Liners Mota Tsoka Mats
Yakasarudzika Yakagadzirwa TPE Floor Mats ye Auto Mukati
China Fekitori Yakananga Kutengesa TPE Mota Tsoka Mats neMutengo Wakanaka
Bensen inogadzira premium kudzivirira-isina mvura TPE (thermoplastic elastomer) rabha ine muganho wakakwirira uyo unobatsira kudzivirira chando, mvura, munyu, jecha uye madhaka kubva mukusvibisa makapeti emota. TPE rabha inodzivirira mamiriro ekunze uye inoshanda mushe chero mamiriro ekunze, kunyangwe mukutonhora kwakanyanya.
Yakakwira Mhando TPE Mota Tsoka Mats neFekitori Mutengo
Anti-skid Car Mat Chigadzirwa ne TPE Chinyorwa